२४ घण्टामा थपिए ११ सय ६५ को’रोना सं’क्रमित, यति धेरैले गुमा’य ज्या’न ! – Online Khabar 24
२४ घण्टामा थपिए ११ सय ६५ को’रोना सं’क्रमित, यति धेरैले गुमा’य ज्या’न !
यस्तै ए’न्टिजेन विधिद्वारा गरिएको ३ हजार ९७१ परीक्ष’णबाट ३४६ जनामा पो’जिटिभ देखिएको छ । २४ घण्टामा पी’सीआर र एन्टि’जेन विधिबाट गरिएको १५ हजार १७९ परीक्ष’णमा १ हजार ५११ जनामा सं’क्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यस्तै थप १ हजार ८९ जना सं’क्रमणमु’क्त भएका छन् । हालसम्म नि’को हुनेको संख्या ७ लाख ४५ हजार २१५ रहेको छ । नेपालमा को’रोना सं’क्रमणबाट थप ११ जनाको मृ’ त्यु भएको छ । हालसम्म को’रोनाबाट मृ’ त्यु हुनेको संख्या ११ हजार २ पुगेको छ ।
हालसम्म देशभर ४० लाख ६८ हजार ५९१ नमुनाको पी’सीआर परीक्ष’ण भएको छ । ‘क्वारेन्टा’इनमा २२० जना रहेका छन् भने आइसो’लेसनमा रहनेको संख्या २५ हजार ७७२ रहेको छ ।कान्तिपुरबाट साभार गरियको
PrevBREAKING NEWS !! ह्वात्तै बढ्यो को’रोना सं’क्रमण पछिल्लो २४ घण्टामा यति धेरैमा भेटियो सं’क्रमण
nextबिदेशबाट फर्केर घर पुग्ने सपना देखेका उनि बिच बाटोमै अस्ताए !